कोरोना कहर : कुन अवस्थामा गर्भवती अस्पताल जाने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कमला गुरुङ मंगलबार, वैशाख २८, २०७८, ०७:४०:००
काठमाडौं - कोरोना संक्रमणको दर तिव्र गतिमा बढ्दै गएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिन सहज छैन। यातायातको समस्या र कोरोना संक्रमणको डरका कारण नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ।
अझ यो परिस्थितिमा दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य सेवा लिन निकै अप्ठ्यारो पर्छ। विभिन्न अस्पतालहरुमा अहिले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा उपलब्ध छैन।
विश्वलाई आतंकित बनाएको कोरोनाले प्रसूति सेवालाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने गरेको छ। पहिलो लहरको कोरोनाले पारेको असरमा पनि यसको असर देखिएको थियो।
गत वर्ष पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनले गर्भवती तथा सुत्केरी प्रत्यक्ष प्रभावमा परे। परिणामस्वरुप लकडाउनको अवधिमा मृत्यु हुने सुत्केरीको संख्यामा वृद्धि भयो। उक्त अवधिमै मृत्यु हुने सुत्केरीको संख्या त बढेको छ नै स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने महिलाको संख्या पनि कमी आएको थियो।
कोरोनाको उच्च जोखिममा पर्ने समूहमध्ये गर्भवती पनि एक हन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले गर्भवती महिलाहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा पर्ने चिकित्सक बताउँछन्।
गर्भावस्था एक संवदेनशील अवस्था भएकाले पनि महिलालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा विशेष हेरचाहको आवश्यक पर्छ। यो अवस्थामा गरिने सानो हेलचक्र्याईले पनि गर्भपतनदेखि महिलाको ज्यान जाने खतरा हुने हुन्छ। तर देशको विषम परिस्थितिमा गर्भवती महिलाले पनि सहज रुपमा नियमित स्वास्थ्य सेवा लिन सहज छैन।
यो समयमा अत्यावश्यक बाहेक अस्पताल नजान प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सन्देश पौडेल सुझाउँछन्। विशेषगरी २८ हप्ता कटेका गर्भवतीहरु बढी जोखिममा पर्ने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘एकदमै जरुरी पर्यो‍ भने मात्र अस्पताल जानुपर्छ। केही समय परीक्षण नगर्दैमा केही फरक पर्दैन। अस्पताल, भीडभाडमा नजान हामी सुझाव दिन्छौं।’
उनका अनुसार सामान्यतया गर्भधारण भएको ६ देखि ८ पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणका जानुपर्छ। सुरुको तीन महिनामा एक पटक, तीन महिनापछि २८ हप्तासम्म दुई पटक, २८ हप्तापछि ३ देखि ४ पटक नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ। तर अहिले नियमित परीक्षण गराउनु स्वास्थ्यका निम्ति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
घरमा बस्दा पनि परिवारका अन्य सदस्यसँग सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनुनर्पे र साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनुपर्ने उनले बताए। घरमै पनि सामान्य किसिमको व्यायाम समेत गर्नुपर्छ।
अस्पताल जानुभन्दा अस्पतालले उपलब्ध गराउने फोन नम्बरबाट परामर्श गर्न सकिने उनले बताए। तर शरीरमा कुनै असहजता हुने बित्तिकै अस्पताल जानुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘केही समस्या पर्‍यो भने पहिला अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गर्नुहोस्। सिधै अस्पताल नजानुस्’ उनले भने, ‘यदी अस्पताल जानै परे र चिकित्सकले भने मात्र जानुपर्छ।’
कुन अवस्थामा मात्र अस्पताल जाने?
– बच्चा कम चले
– पेट धेरै दुख्न थाले
– रगत बग्न थाले
– पानी बगे
– शरीर सुन्निएमा
– टाउको दुखेमा
– बढीरहेको शरीरको तौल घट्दै गए
– आँखा धमिलो भए